News | Radio Veritas Asia
Papal visit to Myanmar was officially announced on August 28, 2017.
Catholic Bishop Conference of Myanmar made an officially announcement for the visit of Pope Francis to Myanmar.
His Emimence Charles Bo of Archdiocese of Yangon officially announced it from the studio (N7) of Radio Veritas Asia, Philippines.
One year ago... Papal Visit to Myanmar official announcement...
Pope ရဟန်းမင်းကြီး Francis အရှင်သူမြတ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကြွရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်ကြေငြာချက် Nov 27 - 30, 2017
Video Message in Burmese:
Bishop Stephen ( လွိုင်ကော်ကက်သလစ်ဂိုဏ်းအုပ်သာသနာ)
The foundation of the Priesthood and Eucharist is in Last Supper. The fullness of the priesthood is in Bishop and the priests share fullness of the priesthood of Bishop who succeeded from the Apostles.
As James and John answered that they can drink the cup, Christ is going to drink. It is the the cup of salvation and the cup of suffering. The priest has also to drink the cup.
The priesthood is precious and valuable. It is like the treasure in the clay vessel. The treasure has the great value but the clay vessel is fragile so handle with great care.
Pastoral Visit to Catholic Major Seminary, Yangon
Bishop John Saw Yaw Han (Auxiliary Bishop of Archdiocese of Yangon, deliveredaspeech in Catholic Major Seminary. Bishop said, "Those who really believed in God are to be ordained but not those who do not believe in God. We are in the present of God in every moment. Msgr. Burno Sein Win said, "If you do not believe in God, you cannot becomeapriest." Does my life center Christ? Am I growing in the likeness of Christ? What is my status of personal communion with God?"
Bishop Felix, Diocese of Kalay, President of Catholic Bishop Conference of Myanmar. "... being confident of this, that he who beganagood work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus." Phil. 1:6 Here (CMS) is the future of the Church in Myanmar. You are going to be future shepherd. The shepherd is in front of the sheep. Have the spirit of contextualization.....
လူငယ်များအား ဖြူစဉ်ခြင်းပါရမီ ရယူသိမ်းပိုက်ရန် ရဟန္တာ Stanislaus သင်ကြား
သြဂုတ်လ ၁၆၊ ၂၀၁၈
ကက်သလစ်ရဟန်းဖြစ် တက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်မေဂျာ) တွင် ကာဒီနယ်ချာလ်းစ်ဘို ဟောကြားခဲ့သော သြဝါဒ
အိန္ဒိယ နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ရေးဘေးကြောင့် သေဆုံးဒုက္ခရောက်ရသူများ အတွက် ကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများ ဝမ်းနည်းပူဆွေးရကြောင်းထုတ်ဖော် သြဂုတ်လ ၁၆၊ ၂၀၁၈
အိန္ဒိယ နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ရေးဘေးကြောင့် သေဆုံးဒုက္ခရောက်ရသူများ အတွက် ကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများ ဝမ်းနည်းပူဆွေးရကြောင်းထုတ်ဖော်
#rainfall, #landslides, #flood, #india, #church, #aid, #vatican, #peterkm,
Photo credit to vaticannews, ucanews
ဘာသာပြန်ဆိုသူ Fr. Peter Kyi Maung
Cardinal Charles Bo, Bishop Felix နှင့် Bishop Saw Yaw Han တို့ ကက်သလစ်ရဟန်းဖြစ်တက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်မေဂျာ) သို့ အလည်အပတ်ကြွရောက်
Cardinal Charles Bo, Bishop Felix နှင့် Bishop Saw Yaw Han တို့ ကက်သလစ်ရဟန်းဖြစ်တက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်မေဂျာ) သို့ အလည်အပတ်ကြွရောက်ခါ ရဟန်းလောင်း ကျောင်းသားများအား အားပေးစကားနှင့် ဆုံးမစကားများ မြွက်ကြားခဲ့ပါတယ်။
(ဆရာတော်ကြီးများ မြွက်ကြားခဲ့သည်တို့ကို mp4 ဖိုင်နှင့် တင်သွားပေးပါမည်။)
မိဘနှစ်ပါးမှာ ကက်သလစ်ဘာသာဝင်များမဟုတ်သည့်တိုင် သားရတနာမှာ ကက်သလစ်ရဟန်းတစ်ပါးအဖြစ် ထာဝရ ရဟန်းသိက္ခာကိုခံယူခြင်းသတင်း
မန္တလေးကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ ဆရာတော်ကြီး နီကောလားစ်မန်ထန်းလက်တော်မှ ဦးပဉ္စင်းကြီး ယောဟန်လောကီးသည် ( ၃၀ မေ ၂၀၁၈)ရက်နေ့က မင်းတပ်မြို့ ယေဇူးရွှေနှလုံးတော် စီရင်စု ဘုရားကျောင်းတွင် စိန်ထရေဇားလမ်းစဉ်သွယ်သာသနာပြုအသင်းဂိုဏ်းဝင်အဖြစ် ထာဝရ ရဟန်းသိက္ခာကို ခံယူခဲ့ပါသည်။
မန္တလေးကက်သလစ် သာသနာတော်လုံးဆိုင်ရာ နွေရာသီသက်ထွေးသင်တန်းကျင်းပခြင်း
မန္တလေးကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာလုံးဆိုင်ရာ ကလေးသူငယ်များ
ဧပြီလ (၄-၈) ရက်နေ့ထိ ချမ်းသာကုန်း စိပ်ပုတီးမယ်တော် သခင်မ ဘုရားကျောင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
သင်တန်းသို့ မန္တလေးကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာအတွင်းရှိ သာသနာအုပ်စု အသီးသီးမှ ကလေး သူငယ်ပေါင်း (၄၀၀)ကျော်ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
သင်တန်းအတွင်းတွင် ကလေးသူငယ်များကို မန္တလေးသာသနာအတွင်းရှိ ဘုန်းတော်ကြီးများ ၊ ကိုရင်များ ၊ သီလရှင်များမှ ဟောပြောပို့ချခဲ့ပါသည်။
မန္တလေးကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာပိုင် ဆရာတော်ကြီး နီကောလာစ်းမန်ထန်း၏ သက်တော်(၇၅)နှစ်ပြည့်နှင့် ရဟန်းဝါတော်(၄၅)နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း
မန္တလေးကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာပိုင် ဆရာတော်ကြီး နီကောလာစ်းမန်ထန်း၏ ရဟန်း ၀ါတော်(၄၅)နှစ်ပြည့် ဂျူဗလီအခမ်းအနားကို ချင်းပြည်နယ် မင်းတပ်မြို့ ယေဇူးရွှေနှလုံးတော် စီရင်စု တွင် မေလ (၂၉)ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
မြေပြင်ပေါ်မှာ ခြေချပြီး ကောင်းကင်သို့ မော့ကြည့်ခြင်းအကြောင်း ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
တနင်္ဂနွေနေ့ ရေဂျီးနာချယ်လီ မေတ္တာရွတ်ဆိုရာမှာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ် အရှင်သူမြတ်က သခင်ယေဇူးရဲ့ ကောင်းကင်ဘုံ တက်ကြွခြင်းဟာ သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ ဖခမည်းတော် လက်ယာဘက်မှာထိုင်းပြီး ဘုန်းတန်ခိုး ပြည့်စုံတဲ့နေရာ ကောင်းကင်ကို ငေးမျှော်ကြည့်ဘို့တွန်းအားပေးပြီး တဖက်မှာတော့ အသင်းတော်ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် အစပြုခြင်းကို အသိပေးနေတဲ့ အချက် ၂ချက်ကို တွေ့ရပါမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဆေးကြောခြင်းမင်္ဂလာရဲ့ အသီးအပွင့်များ သင်တို့ ဘ၀ထဲ၌ ဖြစ်ထွန်းပါစေ လို့ ပုပ်ဖရန်စစ် ဆန္ဒပြု မြွက်ကြား
ခရစ်ယာန် အယူဝါဒရဲ့ ပထမရာစုနှစ် အချိန်တည်းကစပြီး ဆေးကြောခြင်း စက္ကမင်တူး ခံယူချိန်မှည အ၀တ်ဖြူသစ် ကို ၀တ်ဆင်ခြင်းဟာ ခရစ်တော်နဲ့ သန့် ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်ဘုရားအားဖြင့် သစ်လွင်တဲ့ ပြောင်းလဲခြင်းအသက်တာ ရဲ့ သင်္ကေတ တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သံပေါလုက ကော်လော်သဲမြို့ သားတို့ ထံရေးစာထဲမှာ ရှေးဦးယုံကြည်သူတွေကို ကျွန်ုပ်တို့ ဟာ ခရစ်တော်နဲ့ လွှမ်းခြုံခြင်းခံရတယ်ဆိုရင် ကြင်နာသနားခြင်း၊ ကိုယ်ချင်းစာတရား နှိမ့်ချခြင်း သိမ်မွှေ့ ခြင်းနဲ့ စိတ်ရှည်ခြင်း ပါရမီတို့ နဲ့ တည်ရှိပြီး ဘုရားရှင်လိုပဲ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး သည်းညှဉ်းခံပြီး ခွင့်လွှတ်ကြပါ။ အဲ့ဒါတွေ အားလုံးရဲ့ အထက်မှာ တော့ ပြည့်ဝတဲ့ စည်းလုံးခြင်းကို ပေးတဲ့ ချစ်ခြင်းေ
သန့် ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်ဘုရား မပါရင် ဘာမှ မလုပ်နိုင်ပါဘူး လို့ ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
၂၃၊၅၊၂၀၁၈ တနင်္ဂနွေနေ့ က ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ် အရှင်သူမြတ်က ခရစ္ဆမားအားပေးခြင်း စက္ကရမင်တူး အကြောင်းကို ဦးတည်ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။ အသင်းတော်ရဲ့ ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအရ ပန်တော့ကော့စ် ပွဲတော်ကို ကျင်းပပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ခရစ္ဆမားအားပေးခြင်း စက္ကမင်တူးဆီကို ဦးလှည့်ကြပါစို့ ။ ဆေးကြောခြင်းစက္ကမင်တူးရဲ့ ကျေး ဇူး တွေကို အတည်ပြုပေးပြီး ဒီကမ္ဘာလောကကြီးကို သက်သေခံနိုင်အောင် ၀ိညာဉ်တော်ဘုရားနဲ့လ်ိမ်းကြံပေးပါတယ်။ သခင်ယေဇူးကိုယ်တော်တိုင်ဟာ သန့် ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်ဘုရားနဲ့ ပြည့်ဝခဲ့ပြီး ဘုရားရဲ့ ရွေးကောက်ခံရသူအဖြစ် သန့် ရှင်းစင်ကြယ် မှုနဲ့တာဝန်ဝတ္တရား တွေကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်တော်ဟာ သူ့ ရဲ့ တပည့်တော်ကြ
© 2018 Radio Veritas Asia. All rights reserved.